မာ့ခ် ဇက်ကာဘာ့ဂ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မာ့ခ် အယ်လီယက် ဇက်ကာဘာ့ဂ် (Mark Elliot Zuckerberg) (၁၉၈၄ မေ ၁၄ - ) သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင်၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ၊ ပရဟိတ ဒါနရှင်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုဆက်ဆံရေး ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဖန်တီးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ယူနေစဉ် တတန်းတည်းသား ဒပ်စတင် မော်စကိုဗစ် (Dustin Moskovitz)၊ အက်ဒွာဒို ဆေ့ဗရင်း (Eduardo Saverin) နှင့် ခရစ် ဟယူးစ် (Chris Hughes) တို့နှင့်အတူ ကုမ္ပဏီအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှ မာ့ခ် ဇက်ကာဘာ့ဂ်အား ၂၀၁၀ ခုနှစ်၏ အထူးခြားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး နှစ်ချုပ် မျက်နှာဖုံးရှင်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Zuckerberg in 2011
(၁၉၈၄-0၅-၁၄) ၁၄ မေ၊ ၁၉၈၄ (အသက် ၃၇)
ပါလို အော်လ်တို၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား
ဟားဗတ် ကောလိပ် (၂၀၀၄ တွင် ကျောင်းထွက်)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ တည်ထောင်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး ဘီလျံနာ ဖြစ်လာခြင်း
Dobbs Ferry၊ နျူးယောက်
US$ 6.9 billion (2010)
ရန်ဒီ ဇက်ကာဘာ့ဂ် (အမ) 
၂၀၁၀ ခုနှစ် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဩဇာအကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်
စိတ္တဗေဒပညာရှင် မိခင် ခယ်ရင် (Karen) နှင့် သွားဆရာဝန် ဖခင် အက်ဒွပ် (Edward) တို့က မာ့ခ် ဇက်ကာဘာ့ဂ်အား နျူးယောက်ပြည်နယ် ဟွိုက်ပလိမ်းစ်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မာ့ခ်နှင့် အမ ရန်ဒီ (Randi)၊ ညီမ ဒေါ်နာ (Donna)၊ (Arielle) တို့နှင့်အတူ ဒေါ့ဘ်စ် ဖယ်ရီမြို့ (Dobbs Ferry) တွင် ကြီးပြင်းကြသည်။  မိဘများက သူ့အား ဂျူးလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာဓလေ့အရ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သော်လည်း မာ့ခ်က သူသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဇက်ကာဘာ့ဂ် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွင် ရူပဗေဒ၊ သင်္ချာစသည့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များတွင်သာမက နိုင်ငံခြား ဘာသာရပ်များတွင်ပါ ထူးချွန်ပြောင် မြောက်သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း လျှောက်လွှာတွင် သူသည် အင်္ဂလိပ်အပြင် ပြင်သစ်၊ ဟီဘရူး၊ လက်တင်နှင့် ရှေးဂရိ ဘာသာများကို ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ကြောင်း ရေးဖြည့်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ကောလိပ်တွင် သူသည် ရှေးဟောင်း ကဗျာလင်္ကာများကို ကိုးကား ကောက်နုတ်တတ်လေ့ရှိကြောင်း လူသိများသည်။
မာ့ခ် ဇက်ကာဘာ့ဂ်သည် ပရစ်စီလာ ချန် (Priscilla Chan) တို့သည် မာ့ခ် တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်အတွင်း ကျောင်းသားအသင်းမှ ကျင်းပသည့် ပါတီပွဲတစ်ခု၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ ချစ်သူများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဇက်ကာဘာ့ဂ်သည် ဆေးကျောင်းသူ ပရစ်စီလာ ချန်အား သူ ပါလို အယ်လ်တို (Palo Alto) ၌ ငှားရမ်းထားသည့် အိမ်တွင် အတူနေထိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဇက်ကာဘာ့ဂ်သည် တရုတ်ဘာသာကို နေ့စဉ်သင်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးသည် တရုတ်ပြည်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်ပြည်၌ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အပိတ်ဆို့ခံရမှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
သူ၏ facebook စာမျက်နှာတွင် သူသည် လူအများ၏ ဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်များ စီးဆင်းမှုကို ကူညီရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်သည် colour blind တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အပြာရောင်ကို သာ‌ သေချာခွဲခြားနိုင်သောကြောင့် facebook ၌ အများဆုံး အသုံးပြုထားသော အရောင်မှာ အပြာရောင်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်သည် ငယ်စဉ်ဘ၀ ကတည်းက ကွန်ပျူတာ ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူနေစဉ် ကတည်းက ဆော့ဖ်ဝဲလ် များ ကိုစတင်ရေးသား ခဲ့သည်။ သူ၏ ဖခင်သည် သူ့ကို ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်ရေးနည်း သင်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Newman ၌ ဆက်လက် သင်ကြားခဲ့သည်။ မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်သည် အထူးသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး များဖြင့် ဂိမ်းများကို ရေးရန် စိတ်ပါဝင်စားခဲ့သည်။ ZuckNet အမည်ရှိ ပရိုဂရမ် တစ်ခုရေးသားခဲ့ပြီး ထို ပရိုဂရမ်မှာ နေအိမ်များနှင့် သွားကျန်းမာရေးရုံး ဆက်သွယ်ပေးရာ၌ အသုံးပြုခဲ့သည်။ မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်သည် အထက်တန်းကျောင်းတက်နေစဉ် Intelligent Media Group ကုမ္ပဏီလက်အောက်၌ music player တစ်ခုဖန်တီးခဲ့ပြီး Synapse Media Player ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ Microsoft ကုမ္ပဏီနှင့် AOL တို့က မာ့ခ်ဇက်ကာဘာ့ခ်ဆီမှ ဝယ်ယူရန် ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့် သူက ဟားဗက် တက္ကသိုလ်၌သာ သုံးရန် ရွှေးချယ်ခဲ့သည်။
↑ David Kirkpatrick။ The Facebook Effect။ p. 322။
↑ "In Pictures: Youngest Billionaires: Mark Zuckerberg, U.S.: Age 23: $1.5 billion, self-made" (March 5, 2008). Forbes.
↑ Mark Zuckerberg profile on Forbes magazine။ 8 July 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Vargas, Jose Antonio (September 20, 2010)။ The Face of Facebook။ The New Yorker။ 2010-09-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hardy (December 6, 2010)။ Is Zuckerberg Person of the Year??first=Quentin။ Forbes magazine။
↑ Gonzales၊ Sandra။ "Zuckerberg to donate wealth"၊ Silicon Valley Mercury News၊ December 8, 2010။
↑ TIME Names Mark Zuckerberg Person of the Year။
↑ Burrell၊ Ian (2010-07-24)။ Mark Zuckerberg: He's got the whole world on his site။ The Independent။ 27 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-11- တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ Boggan၊ Steve (2010-05-21)။ The Billionaire Facebook Founder makingafortune from your secrets (though you probably don't know he's doing it)။ Mail Online။ 2010-08-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vara၊ Vauhini (2007-11-28)။ Too Much Information? - wsj.com။ Online.wsj.com။ 2010-06-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Spiegel၊ Rob။ "Zuckerberg Goes Searching in China"၊ December 20, 2010။
↑ Facebook founder Mark Zuckerberg learn chinese every morning။ ChineseTime.cn (September 29, 2010)။ 24 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာ့ခ်_ဇက်ကာဘာ့ဂ်&oldid=732360" မှ ရယူရန်
၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။